Linn Ko: May 2013
Huawei Official Firmwares Collection for My Friend (Mediafire Link)
MMAS မှတဆင့် မူလအတိုင်း ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် .... အသုံးလိုသူများ၊ ကျွန်တော့် Blog သို့ အလည်လာသူများ လိုအပ်နေသူများ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ရန်
Posted by Linn Ko at 5:56 PM No comments:
ကျွန်တော် ဟိုရှာ ဒီရှာလုပ်ရင်းတွေ့ထားတာပါ... သုံးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ... ကျွန်တော်
တော့ မသုံးတတ်ဖူးဗျ.... Google Play နဲ့ Uploaded က တိုက်ရိုက်ဆွဲရင်တော့ Version 2.5.19 ရမယ်ဗျ... Mediafire ဆိုရင်တော့ 2.3.52 ပဲရမယ်.... Android 2.2 နဲ့ အထက်ဆိုရင် သုံးလို့ရပါပြီ... လိုအပ်တယ့်
The two Browser which is not have Myanmar Typing Error in ICS and Jelly Beam
Android Version ICS တို့ Jelly တို့မှာမြန်မာစာလုံးဝမလွဲတဲ့ Browser နှစ်ခု ပါ....
လိုချင်သူတွေ အတွက်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်...
Posted by Linn Ko at 12:48 PM No comments:
Updated: May 30, 2013 ရက်နေ့ မှာထွက်ရှိတဲ့ ပူပူနွေးနွေးကင်မရာလေးပါ..
FUTURE အသစ်တွေပါဝင်လားတယ်ဗျာ.. ဘာတွေပါဝင်လာလဲဆိုတော့..
Browser4MM အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မေလ 30 ရက်နေ့ အပ်ဒိတ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Android Phone & Tablet များအတွက် မြန်မာလို မရှိလဲ ၀က်ဆိုက် နဲ့ တခြားသော အင်တာနက်စာမျက်နှာများ မြန်မာလိုဖတ်နိုင်တဲ့ Android App လေးများပါ။
အခုတခါ Huawei C8813 လေးအမြစ်လှန်နည်းလေးပြပေးမယ်ဗျာ…U8825D တို့လိုမျိုးပဲ Bootloader Unlock အရင်လုပ်ရတယ်ဗျ….Bootloader Unlock လုပ်ဖို့သူ့ Official Site မှာ Unlock code 16 လုံးအရင်တောင်းရပါမယ်…
Unlock Code တောင်းဖို့ အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်တွေကသွားပါ……
Posted by Linn Ko at 11:12 AM No comments:
ဒီတခါ စက်ရုပ်သမားတွေမရှိမဖြစ်သုံးရမယ့် Tool လေးတခုပေးမယ်….ဘာလို့မရှိမဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့….
Root ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Firmware Flash ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းကိုကွန်ပြူတာကသိအောင်…မရှိမဖြစ်လိုတဲ့ ADB Driver
Huawei C8813 အတွက် Samsung Galaxy S4 Style ROM လေးပါ။ ဒီ ROM လေးကိုတင်ဖို့အတွက်ဖုန်းမှာ CWM သွင်းထားဖို့နဲ့ ၊ Root လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ROM ဇစ်ဖိုင်လေးကို Download လုပ်ပြီး CWM Recovery ထဲကနေ Install လုပ်ရုံပါပဲ။ အောက်က Link မှာ Huawei C8813
Posted by Linn Ko at 10:38 AM No comments:
Android ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီး ရတနာပုံ တယ်လီပို့ရဲ့ service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ytalk ကို Android ဖုန်းနဲ့ခေါ်ဆိုချင်သူများအတွက် Ytalk for Android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းမှာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားပြီး Ytalk ဆော့ဝဲရှိပြီဆိုရင် နိုင်ငံရပ်ခြားကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီ
Posted by Linn Ko at 10:17 AM No comments:
ကျွန်တော်တို့ U8815 လေးကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Root လုပ်ကျရအောင်
Posted by Linn Ko at 4:55 PM No comments:
Samsung galaxy S4 GT-I 9500 အား အရင်နည်းနဲ့ Root မပေါက်သူတွေ အတွက် အခုနည်းနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်.. .အရင်ဆုံးလို အပ်တဲ့ ဖိုင်တွေ ဒေါင်းပါမယ် ..
Posted by Linn Ko at 4:48 PM No comments:
Mac OS X အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Download manager လေးပါ
Posted by Linn Ko at 2:35 PM No comments:
ဒါကတော့ ရုံးသုံး စရင်းကိုင် တွေအတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆောစ်ဝဲလ်လေးပါ
သူက DOC, DOCX. XLS, XLSX, PST, PPT
Word, Excel, PowerPoint and Outlook files တွေကို မှားဖျက်မိတာဖြစ်ဖြစ်
Posted by Linn Ko at 2:24 PM No comments:
ပထမဆုံး ဒီ ဖိုင်လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။
Y210 Recovery Installer http://www.d-h.st/EOf
Posted by Linn Ko at 2:17 PM6comments:
Air Figthers လုပ်ရအောင်ဗျာ..
လေကြောင်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွဲဖို့ အတွက် ဂိမ်းဆိုက်လည်းသေး၊ဆော့လို့ လည်းကောင်းတဲ့
Posted by Linn Ko at 10:54 AM No comments:
App တွေ ဂိမ်းတွေ မှာပါတဲ့ License တွေုဖြုတ်ဖို့Google ရဲ့ လိပ်စာတွေဖျက်ဖို့ ၊ နောက်အခြားခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိပါသေးတယ်
Posted by Linn Ko at 10:29 AM No comments:
Piranha 3DD ဇာတ်ကားကြည့်ဘူးကြတဲ့အတိုင်းကြောက်မက်ဖွယ်
ကျူထိုးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဂိမ်းအလန်း
အရင်ကတော့ အိုင်ဖုန်းအတွက်ဘဲထွက်ပါတယ် အခု စက်ရုပ်အတွက်ပါ
Posted by Linn Ko at 5:29 PM No comments:
LINE အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် (27.5.2013) ထွက် Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မားကတ်ထဲဝင်မရလို့ အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
Posted by Linn Ko at 5:20 PM No comments:
Android ဖုန်း/Tablet တွေမှာ ဖုန်းဆော့ဝဲ ၊ ဂိမ်းတွေသွင်းတာများလာရင် ဖုန်းကသုံးရတာ လေးလံနှေးလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် AppMgr Pro III for Android ကိုအသုံးပြုပြီး ဖုန်း memory ထဲမှာသွင်းထားတဲ့ App,Game တွေကို ဖုန်းရဲ့ External Memory (SD Card)
Posted by Linn Ko at 3:30 PM No comments:
၁။ ဖုန်းမှာပါတဲ့ Email ကို ဖွင့်ပါ။ ကိုယ့် Gmail ရဲ့ Username နဲ့ Password ကို ထည့်ပေးပါ။
၂။ Sign in နှိပ်လိုက်လို့ မကြာခင် Couldn’t open connection to server ဆိုပြီး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Edit Details ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Posted by Linn Ko at 11:17 PM No comments:
Onekeyroot လေးက ဖုန်းတော်တော်များများကို root လုပ်လို့ရပါတယ် ။ Root လုပ်လို့ရနိုင်မဲ့ ဖုန်းစာရင်းကိုအောက်မှာပေးထားပါတယ်...လေ့လာပြီးတော့ လိုအပ်ရင် Download လုပ်နိုင်ပါတယ်..
Posted by Linn Ko at 4:54 PM3comments:
ဗီဒီယိုချက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Video2Webcam Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ... သူ့ကိုMSN, Camfrog, Skype, ICQ, AIM, Paltalk, Yahoo Messenger,ANYwebcam, Stickam, ICUII, Ustream.tv, iSpQ, etc တွေနဲ့တွဲပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်..... အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဒီမှာ
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ ပြေးရတဲ့ ဂိမ်းလိုပါဘဲနဂါးနောက်လိုက်ပြီး လမ်းမှာတွေ့တဲ့ သူရန်သူတွေကို နှိမ်နှင်းအခက်ခဲတွေကို ကျော်လွားရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ.... ဂျပန်တီးလုံးလေးနဲ့ဆိုတော့ နားထောင်လို့လည်းကောင်းပါတယ်
Posted by Linn Ko at 11:31 AM No comments:
Android OS ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မယ့် Application လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ninja SMS for Android v1.3.3 (Latest Version) Update ထွက်ရှိလာတာကြောင့် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာဆော့ဝဲတစ်ခုခုသုံးနေတဲ့အချိန် ၊ ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန် ၊ ဂိမ်းတစ်ခုခုကစားနေတဲ့အချိန်မှာ
Posted by Linn Ko at 11:27 AM No comments:
Internet Explorer မှာ Zawgyi-One ရွေးသော်လည်း မြန်မာလိုမမြင်ရခြင်းကိုဖြေရှင်းနည်း
Internet Explorer မှာ Zawgyi-One ရွေးသော်လည်း မြန်မာလိုမမြင်ရတာကိုဖြေရှင်းနည်း လေးတင်ပေး
လိုက်ပါတယ်မြန်မာစာ ၊ စာလုံးတွေ အတုံးအတုံးတွေအဖြစ်နဲ့ မမြင်ရတဲ့ အခါ ...
ပထမဆုံး notepad ကို ဖွင့်ပြီး..........................
Posted by Linn Ko at 3:35 PM2comments:
Samsung Galaxy S Duos S7562 ကို root လုပ်ချင်တဲ့ ဘော်ဒါများ အရင်ဆုံး Computer မှာ
Samsung USB Driver အရင်သွင်းထားရမှာပါ ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလိုက်ပါ....
Posted by Linn Ko at 3:19 PM No comments:
Zawgyi-One Flipfont for Samsung (Not need to Root)
Myanmar Mobile Developer ကိုမျိုးမင်းလတ်ရဲ့ဖန်တီးမှု့လေးပါ။ Samsung Brand အားလုံးမှာ Root မလိုပဲနဲ့ Font Style လေးတွေပြောင်းလဲအသုံးပြုနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar+Helvetica, Myanmar +Iphone, Myanmar +SoMA ,Myanmar +Ubuntu, Myanmar+Choco cooky,
Posted by Linn Ko at 1:56 PM4comments:
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.... Laptop ပိုင်ရှင်များအတွက် အသုံးဝင်မယ့် BatteryCare 0.9.14.0 ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်....
BatteryCare isasoftware created to optimize the usage and performance of the modern laptop’s battery. It
Posted by Linn Ko at 10:55 AM No comments:
Posted by Linn Ko at 10:48 AM No comments:
Android ဖုန်းတွေအတွက် လူကြိုက်များတဲ့ Launcher Theme လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Action Launcher လေး May 25 ရက်နေ့ထွက် Action Launcher Pro v1.7.1 version အသစ် ထွက်လို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Action launcher ဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အသုံးပြုရတာ
Android ဖုန်းကိုင်သူတွေ အတွက် အလန်းစား Launcher တစ်မျိုးဖြစ်ြပီး .. .3D ဒီဇိုင်းများနဲ့ မိမိဖုန်းကို တန်ဆာဆင်နိုင်မှာဖြစ်သလို . Widget များကိုလည်း 3D ဒီဇိုင်း ရှုစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ….Google Paly မှာ 14.95 ဒေါ်လာပေးဝယ်ယူ သုံးစွဲရမှာဖြစ်မှာပါ ... ဒီမှာတောါ Freedownload ရယူနိုင်ပါပြီ.. အောက်မှာ
Posted by Linn Ko at 12:44 PM No comments:
Android OS ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတွေအတွက် မိမိဖုန်းမှ apk များကိုသူများတွေဝင်ကလိလို့မရအောင်ပိတ်ထားတဲ့ apk lock လေးပါ…
သုံးရတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်…..Lock ty pe အနေနဲ့ Pin lock….Pattern
Facebook Free Call for Windows, MAC, IOS and Android
Facebook အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် FreeCall ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ Application လေးပါ ..Application လေးရဲ့အမည်ကတော့ SAYTYA Facebook Caller လေးပါ...ဒီကောင်လေးကတော့ Android and IOS Device တွေအပါအ၀င် Window OS and MAC OS တွေပေါ်မှာပါတင်ပြီး
Posted by Linn Ko at 12:37 PM4comments:
Labels: Android Application, iOS Application, Windows
Toy Story Smash ဂိမ်း နှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
Update ထွက်လာပါပြီ ကစားကြည့်ပါဗျာ အကြိုက်တွေ့မှာပါ
Posted by Linn Ko at 12:32 PM No comments:
ဒီတစ်ခေါက် Tweak ကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ဒီကောင်လေးက Best Jailbreak Tweaks of The Week ထဲရောက်နေပါတယ်။ iPhone တွေမှာ Password နဲ့ ပိတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မဲ့ Tweakကောင်းလေးပါ။Password နဲ့ ပိတ်တဲ့သူတွေက ဖုန်းခေါ်မယ်ဆို Password ကြီး
To See the SMS in Your Girl-friend Phone (Android Only) :)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိမိဖုန်းထဲကနေ မိမိကောင်မလေးဖုန်းထဲကို လှမ်းကြည့်မယ်လေ တခြားတော့ဟုတ်ဘူးနော် Phone Call , Message, Contact, Miss Call အဲဒါတွေကိုပြောတာနော်... အခြား Feature တွေလည်းပါသေးတယ်နော် နဲနဲ စချင်ရင် Vibrate, Silent,
Installation .deb Files to iDevice (Not need internet connection)
Deb ဖိုင်သွင်းနည်းများထဲက အလွယ်ဆုံးနည်းကိုပြောပြပါမယ်။
Deb ဖိုင်ဆိုတာ Cydia Source တွေထဲက Tweak တွေကိုအပြင်ထုတ်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုပြောတာပါ။
1-deb file သွင်းဖို့ ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး iTools သို့iFanBox ရှိရပါမယ်။
Galaxy S3 GT-i9300 ရဲ့ leaked firmware 4.2.2 အား Root ဖောက်ဖို့အတွက် အောက် ကဖိုင်တွေကို အရင် ဒေါင်းပါမယ် …
Windows XP to Windows Vista Changer (For Windows XP Only)
တစ်ကယ်ပါဗျာ .. Google မှာ လှည်ပတ်မွှေနှောက်နေရင်း ဒီဆော့ဝဲလေးကိုတွေ့လာတာပါ
ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်း မယုံချင့်ယုံချင်ပါပဲ .. တွေးကြည့်မိသေးတယ် .. နိုင်ငံခြားသား
ဘလော့ကာတွေက တစ်ခါတစ်ခါကျရင် အလွန်အကျွံကြီးတွေ ရေးတတ်လွန်းလို့
Posted by Linn Ko at 5:49 PM No comments:
Advanced Archive Password Recovery v4.53 Professional for Windows PC
In this post, I've sharedaprogram called "Advanced Archive Password Recovery Professional".
As you know, the program costs $99 for pro version if you order online.
Posted by Linn Ko at 5:44 PM No comments:
Android ဖုန်းတွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်
ကူညီပေးမယ့် ဆော့ဝဲလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒီဆော့ဝဲလေးကို Install လုပ်ထားလိုက်ရင်
Posted by Linn Ko at 5:41 PM No comments: